7 ka Mid ah Dhalinyarada uu Talo-xumeeyey Jwxo-shiil, oo Lagu Xidhay St Paul – Rasaasa News
7 ka Mid ah Dhalinyarada uu Talo-xumeeyey Jwxo-shiil, oo Lagu Xidhay St Paul
Aug 8, 2010 ethiopia, Jwxo-shiil, Ogaden, ONLF, UWSLF
Hal kudhaga sanadkan Jwxo-shiil “ma doonayo in ay nabad ka dhacdo Ogadeeniya waligeed “BBC.” Dagaalkii budhcadnimada ahaa ee uu ku baaqayey dambiile Jwxo-shiil, oo shalay galabtii gacmaha la isula tagay hool si nabadgaliyo ah uu uga dhacayey shir ay lahayd Jaaliyada Somalida Ogadeeniya.
Dhalinyaro dhawra beesha Jwxo-shiil ah, ayaa laga dhaadhiciyey in ay dagaalo ka kiciyaan goobaha ay Jaaliyada Somalida Ogadeeniya isugu timaado. Werararka ay qaaday dhalinyada sida beesha ah ku taageerta Jwxo-shiil, ayaa si wanaagsan loo soo abaabulay si ay u galaan dambi.
Dhalinyarada ayaa waxaa telefoonka ku amrayey Jwxo-shiil, oo la sheegay in uu joogay guri uu ka degan yahay dalka Ingriiska, halkaas oo dambiyada ka dhex dhaca dadweynaha Somalida Ogadeeniya laga soo abaabulo.
Sida ay wararka ka imanay St. Paul sheegayaan Janaraal Cabdiraxmaan Khaliif Dhicis oo ka mid ahaa dadka ka hadlayey [speaker] shirka ayey nabaro sahlan soo gaadheen.
Dhalinyaradan gashay dambiyada ayaa waxaa gacanta ku dhigay Booliska St Paul, waxaana ku socda baadhitaan uu wado boolisku. Waxaana la filayaa in si deg deg ah maxkamad loo horkeeno, si loogu xukuma dambiyada ay galeen.
Janaraal Cabdiraxmaan Khaliif Dhicis oo aad u jecel nabada la rabo in ay ka hirgasho gayiga Somalida Ogadeeniya, si wanaagsana ula socda khidadaha uu isticmaalayo Jwxo-shiil, ayaa balan ku qaaday in uu si cad oo beel ahaana ula dagaalamayo Jwxo-shiil, madaama uusan dan ka lahayn Jwxo-shiil, cidna qoyskiisa mooyee.
Raxanweynta ayaa ku maahmaahda “hoobaad naar galayso hurin dareer”, oo uu macnaheedu yahay kolba hadaad Ehelunaar tahay waxba dambi ha iska dhawrine xoog u dhex dabaalo.
Jwxo-shiil, oo isagu og in uu dambiile yahay, dambiyada uu galayna lagu ciqaabi doono mid uun gacan ama sharci ayaa jecel in dadka oo dhan ay sidiisa noqdaan. Jwxo-shiil, ayaa jecel in ay xabsi wada galaan dhalinyarada Somalida Ogadeeniya waa hadii uu helayo.
Kolkaba hadii ay arintu sidaas tahay, waxaa muhiim ah in Jaaliyada Somalida Ogadeeniya ee degan dalka Ingriisku ay mid uun adeegsadaan shanta ama sharciga si looga masaafuriye dambiile Jwxo-shiil, dalka Ingriiska.
Wafti ka Socda Ismaamulka Somalida oo Gaalaabaxaya Magaalooyinka ay ku Badan Yihiin Jaaliyadaha Somalida Ogadeeniya ee Dalka Maraykanka.
Kulan Lagu Taageerayay Heshiisyada iyo Wadahadalada Nabada ee u Dhaxeeya Dawlada Itobiya iyo Ururada ONLF iyo UWSLF.